Soo Iibso budada Pregabalin (148553-50-8) Soosaarayaasha & Warshadaha
Budada Pregabalin (148553-50-8)
Budada Pregabaline (148553-50-8) waxaa inta badan loo isticmaalaa daaweynta Qalalaasaha; Xanuunka neuropathic; Ciladaha walaaca. Waxaa iska leh darajada daroogada loo yaqaan 'anticonvulsants'.
Fiidiyowga budada ee Pregabalin
Magaca Kiimikada (S) -3- (Aminomethyl) -5-methylhexanoic acid
brand Name Lyrica, kuwa kale
Fasalka Daroogada Anticonvulsants, Kale; Kala duwanaanshaha, Kale; Wakiilada Fibromyalgia
Molecular Wsideed 159.229
barafku Psaliid 186-188ºC
Boiling Point 274.0 ± 23.0 ° C ee 760 mmHg
Biological Life-Life Saacadaha 6.3-11.5
Storage Temperature 0 - 4 C muddo gaaban (maalmo ilaa toddobaad), ama -20 C muddo dheer (bilo).
Application Pregabalin waa daawo loo isticmaalo daaweynta suuxdinta, xanuunka neuropathic, fibromyalgia, iyo xanuunka guud ee welwelka.
Budada Pregabalin Description
1.Waa maxay budada Pregabalin?
Budada Pregabalin waa daawo inta badan lagu iibiyo magaca sumadda Lyrica ee gobolada kala duwan ee adduunka. Waa daawo ka hortaga suuxdinta oo sidoo kale loo yaqaan 'anticonvulsant'. Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo waxyaabaha maskaxda ku dhaca ee sababa suuxdinta. Dhanka kale, Pregabalin waxay wax yeelaysaa kiimikooyinka maskaxda ee u dirta calaamadaha xanuunka dhammaan dareemayaasha jirka. Daawada waxaa sidoo kale loo isticmaalaa adduunka caafimaadka in lagu daaweeyo xanuunno kala duwan oo ay sababaan cudurro kala duwan sida xannuunka dareemayaasha ee ay sababaan fibromyalgia, sonkorowga, iyo xitaa xanuunnada laf-dhabarka.
2.Sida loo qaato Pregabalin budada?
Pregabalin (148553-50-8) ayaa jira kaabsal, dheecaan dheeri ah, ama kiniinno shaqeynaya muddo dheer iyo sidoo kale xalka afka (dareeraha). Dhamaan foomamka Pregabalin si isku mid ah ayey u shaqeeyaan, dhakhtarkaaguna wuxuu noqon doonaa qofka ugu fiican ee dooran kara midka kugu habboon adiga oo ku xidhan xaaladaada ama waxa aad rabto inaad ku gaadho dhamaadka wareegga qiyaasta daawada. Ahaanshaha daroogo afka ah ayaa u adeegta dawada xanuunka ugu fiican bukaano badan oo aan isku waafaqi karin duritaanka joogtada ah. Daawadu sidoo kale waxay u horseedi kartaa qaar ka mid ah waxyeelooyinka daran marka si xad dhaaf ah loo isticmaalo ama si khaldan loo isticmaalo. Hubso inaad had iyo jeer raacdo tilmaamaha qaadashada si aad u hesho natiijooyin wanaagsan.
Pregabalin waxaa lala istcimaali karaa daawooyin kale si looga caawiyo daaweynta suuxdinta bilawga ee caruurta da'doodu ugu yaraan afar sano tahay iyo dadka waaweynba. Sanado badan, hadda dawadu waxay door muhiim ah ka ciyaartay caafimaadka adduunka, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dawooyinka xanuunka yareeya ee suuqa ka jira. Daawada waa in lagu qaataa oo keliya warqad dhakhtar oo loo qoro si natiijooyin wanaagsan loo helo. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer iska hubi inaad ka heleyso Pregabalin iibiyaha la isku halleyn karo ama soo-saare ku xeeran.
3.Budada Pregabalin for sale
Dunida ayaa is beddeleysa, maantana, waxaad ka iibsan kartaa budada "Pregabalin" qadka onlayn ah qadkayaga qiimo jaban. Websaydhkeenu waa mid saaxibtinimo leh, oo kuu fududaynaysa inaad u kala wareejiso hal badeeco kale isla markaana aad amarkaaga ku samayso ilbidhiqsiyo gudahood Waxaad ka gali kartaa websaydhkaaga taleefankaaga gacanta, kiniiniga, ama xitaa laptop-kaaga. Intaas oo dhan, waxaan sameynaa alaabooyin daafaha adduunka ah iyo waqtiga ugu gaaban ee suurtagalka ah. Waxaad ka iibsan kartaa Pregabalin fara badan ama xitaa ku filan wareegga qiyaastaada.
4.W Halkee Iibsataa Powder Pregabalin?
Waxaan nahay hormuudka shirkada Pregabalin ee gobolka, qiimaheena aan awoodi karno kuma xadgudbayaan tayada alaabadayada. Waxaan ku bixinaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin caafimaad oo tayo sare leh dukaankeena internetka. Si kastaba ha noqotee, waxaan had iyo jeer kula talinaa macaamiisheenna oo dhan inay hubiyaan inay marayaan baaritaan caafimaad kahor intaysan bilaabin qaadashada alaabadayada. Alaabtayada caafimaadku waxay u horseedi karaan waxyeelo marka si khaldan loo isticmaalo ama si xad dhaaf ah loo isticmaalo. Pregabalin oo iib ah ayaa sidoo kale laga heli karaa farmasiga kuugu dhaw laakiin hubi inaad ka hesho iibiyaha la isku halleyn karo. Maaha dhammaan dukaamada internetka ama dukaamada jir dhiska ay bixiyaan badeecado tayo leh.
Dufanka 5a-hydroxy Laxogenin (56786-63-1)
budada isotretinoin (4759-48-2)
Budada Cialis (Tadalafil) budada (171596-29-5)